Puntland oo sii daysay nabadoon Cabdiqaadir Xarago kadib labo asbuuc oo xabsi ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo sii daysay nabadoon Cabdiqaadir Xarago kadib labo asbuuc oo xabsi ah
March 11, 2017 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Nabadoon Cabdiqaadir Ibraahim Xarago. [Sawirka: Archive]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Nabadoon Cabdiqaadir Ibraahim Xarago oo ku xirnaa xabsiga Boosaaso muddo ka badan labo asbuuc, ayaa la sii daayay, sida ilo-wareedyo dolwadda katirsan u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror.
Nabadoon Xarago ayaa laga xiray gurigiisa oo kuyaala magaalada Boosaaso 25-kii bishii lasoo dhaafay ee Fabaayo kadib markii uu wareysi siiyay idaacada Voa-da qaybteeda Af-soomaaliga kaasoo uu dowladda Puntland ku eedeeyay in ay jir dil u geysato maxaabiista Al-Shabaab ee ku jirta xabsiga Boosaaso si ay u qirtaan dambiyadooda.
Asbuucii lasoo dhaafay, isaga oo la hadlayay idaacada VOA qaybta Af-Soomaaliga Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa qaadacay eedaymaha sheegaya in Puntland ay jirdil u geysato maxaabiista ku jira xabsiyada
Mogadishu-(Puntland Mirror) A Somali military court in Mogadishu on Monday sentenced Ahmed Abdullahi Abdi to death over the killing of Somali Minister for Public Works and reconstruction who killed in Mogadishu last month. Chairman of [...]
IMF oo sheegtay in kobaca dhaqaalaha Soomaaliya uu kordhi karo 3% sanadka 2019
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ku socda dib u kabasho, iyada oo la filayo koboc 3% sanadka 2019-ka halka sanadkii hore uu ahaa 2.9%, halka sicir bararku uu hoos ugu dhacay 3% oo uu awal [...]